Kutheni usikhetha | Jiangxi Kulungile Science kunye neTeknoloji Co., Ltd.
Kulungile iTekhnoloji ineqela elomeleleyo nelinobungcali elijolise koomatshini bephepha lethishu kunye noomatshini bokwenza imaski ngaphezulu kweminyaka eli-10.
Usihlalo wethu uMnu Hu jiangsheng ukwanguye injineli yethu ephambili kunye neentloko
engaphezulu kwe-60 abazizityebi abanamava umatshini zobugcisa, iinjineli ezingaphezu kwama-80 kunye yokundwendwela kunye namava enkonzo aphesheya.
Wonke umphathi wentengiso ubuncinci iminyaka eli-10 yolwazi loomatshini kunye namava kungoko banokuliqonda kwangoko ibango lakho kwaye bakunike isindululo soomatshini ngokuchanekileyo.
2. Umgca opheleleyo "IProjekthi yaseTurkey"
Sikhokela ekuphakamiseni nasekusebenziseni umgaqo wonke wenkonzo "yokujika kweprojekthi" kwishishini. Iimveliso zethu zigubungela umatshini we-jumbo roll iphepha ukuya koomatshini bokuguqula iphepha koomatshini kunye nokupakisha koomatshini ukuze abathengi bethu bonwabele inkonzo enye. Siya kuba noxanduva lwentsebenzo yomatshini opheleleyo kunye nomgangatho kwaye siphephe impikiswano phakathi kwabanikezeli boomatshini abohlukeneyo.
Sinoomatshini abohlukeneyo abanesakhono semveliso esahlukileyo, iidigri ezahlukeneyo zokuzenzekelayo ukuze bonke abathengi bafumane oomatshini abafanelekileyo abahambelana nezinga labo kunye namandla abo.
3.Umgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo, emva kwentengiso ngaphandle kokukhathazeka
Kulungile iteknoloji ithi "Ukuzithemba kuvela kwizakhono zobungcali, ukuthembela kuvela kumgangatho ogqibeleleyo". Phantsi kwesiseko sokuqinisekisa umgangatho, besisoloko sinika awona maxabiso alungileyo kubathengi.
Inkqubo egqibeleleyo nezinzileyo emva kwenkonzo yokuthengisa iqinisekisa ukuba abathengi banokufumana umphathi wakho weentengiso kunye neenjineli ngokukhawuleza kwaye iqela lethu liya kuhlala likuxhasa ngefowuni, ii-imeyile, umthunywa okhawulezileyo nokuba uthengela ezinye izinto okanye ingxaki yokusombulula ingxaki kumatshini. Akukho zinkxalabo malunga nenkonzo yasemva kokuthengisa.